Nofeembar | 2007 | WEEJIDOW
Archive for Nofeembar, 2007
War Deg Deg ah: Mid ka mid ah madaxda degmada Boondheere oo la toogtay xilli uu ku jiray Masaajid ku yaala
Nofeembar 30, 2007
Waxaa goor dhoweyd ay kooxo ku hubeysan Bastoolado ku toogteen madaxii waaxda Siinaay ee demgada Boondheere masaajid ku xaafadaasi Siinaay ee magaalada Muqdisho
Alle ha u naxariistee, marxuumkan ayaa la oran jiray Saalax Nuur Axmed, waxaana toogtay kooxo dhalinyaro ah oo la sheegay inay si gaadmo ah madaxa kala dhaceen rasaasta ka dhacda aaladda bastooladda ah, taasoo uu isla goobtii ugu qurbaxay, sida uu xaqiijiyay nin goob jooge ah oo lagu magacaabo Nuur-gaab.
Marxuumka ayaa meydkiisa loo qaaday goor dhoweyd xaafadiisa, iyadoo halkaasina ay soo buux dhaafiyeen dadweynaha deriska iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda.
Kooxihii dilay madaxii waaxda Siinaay ee degmada Boondheere ayaa baxsaday, lamana garanayo sababaha dhabta ah ee ka dambeeya dilka marxuumkan, waana dilkii ugu horeeyey muddo bil ka badan oo loo geysto qaar ka tirsan madaxda degmooyinka gobolka Banaadir oo iyagu bartilmaameedkii ugu badnaa ee dilalka noqday labo bilood ka hor.
Xudur: Maamulka Gobolka Bakool oo ka digay dhaq dhaqaaq ciidan oo gobolka ay ka wadaan xubno ka tirsan Al-Shabaab
Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in halkaasi ku sugan yihiin rag ka tirsanaa Maxaakiintii Islaamiga ee la wiiqay awoodoodii, kuwaasi oo dhaq dhaqaaq ciidan ka bilaabay tuulooyin ka tirsan degmada Xudur oo xarun u Gobolka Bakool.
Guddoomiyaha Gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tall ayaa ka dhawaajiyay in Sh. Muqtaar Roobow “Abuu Mansuur” uu haatan ku sugan yahay tuulada Abalow oo uu ku dhashay wadaadka halkaasi oo uu ka bilaabay dhaq dhaqaaq ciidan isla markaana ay dadka deegaanka cabsi iyo wel wel ay ka muujiyeen joogitaanka Abuu Mansuur iyo ciidamada uu wato oo ah kuwa fara badan oo ku hubeysan qoryaha garbaha laga tuuro iyo kuwa kale ee daran dooriga u dhaca.
Maxamed Cabdi Tall ayaa sheegay in ciidamadaasi ka tirsanaa Maxaakiimta ay yihiin kuwo aan maamulkiisa u babac dhigi karin isla markaana loo baahan yahay awood ka hortagta in la helo, inta aysan ku fidin gobolka Bakool iyo deegaanada kale ee ku teedsan gobolka.
Ilaa iyo weli ma jiraan ciidamo ka tirsan dowladda oo si bareer ah uga hortago xoogagaasi ka tirsan golihii maxaakiimta ee la burburiyay, markii danbena ku biiray ururka hubeysan ee Al-Shabaab ee uu hoggaamiyo Aadan Ceyrow.
War Deg Deg ah: Baydhabo: Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya oo kala direy Maamulkii gobalka Baay
Baydhabo- Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Md.C/laahi Yuusuf Axmed ayaa Xaruntiisa Baydhabo ka soo saarey Warqad uu Shaqada kaga joojiyey dhamaanba Maamulkii gobalka Baay iyo kii degmada Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sheegay Warqadan in ay arintan ka danbeysay markii uu cuskaday Axdiga dowlada Faderaalka ee Soomaaliya,isla markaana tixgaliyay Cabasho & Talo uga timid Siyaasiinta gobalka Baay ,Waxgarad iyo Malaaqyada Beelaha ku dhaqan gobalkaasi.
Madaxweynaha ayaa ku amray dhamaanba Xubnaha Maamulada Baydhabo iyo kan gobalka Baay in ay joojiyaan Shaqada ay hayaan ,ilaa amar danbe oo ka soo baxa hay’adaha Dastuuriga ee dowlada Soomaaliya.
Wuxuu kaloo Madaxweynuhu shaaciyay in khilaafka soo kala dhexgalay maamulada ka jira Baydhabo iyo kan gobalku keentay in ay Istaagaan guud ahaan howlihii degmada Baydhabo iyo kuwii gobalka,loogana baahan yahay Xubnahaasi in ay dhameeyaan khilaafka udhaxeeya.
Warqadaan oo ku saxiixnaa Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo beegantay maalmo qura ka dib markii ay samada isku shareereen Khilaafka udhaxeeya golaha deegaanka ee degmada Baydhabo Iyo Gudoomiyahooda taasna waxa ay lugu eedaynayaa faragalin uga timid Maamulka gobalka Baay.
War Deg Deg ah: Shaleemo ku taal Isgoyska Siinaay oo xalay bam gacmeed lagu weeraray.
Muqdisho:-Qarax ayaa xalay waxa uu ka dhacay Isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho, ka dib markii bam gacmeed lagu tuuray shaleemo ay koox dhalinyaro ah ku daawanayeen Filim ayadoona kooxaha dilka geystay ay baxsadeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Inta la ‘ogyahay qaraxa waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo dhaliyaro ah waxaana dhaawacooda loola cararay cisbitaalka Keysaneey ma ah markii ugu horaysay ee Shaleemo laga daawanayo filim la weeraro.
Dadlii ku dhaawacmay qaraxa xalay ka dhacay shaleemadaas oo ku taala Isgoyska Siinaay ayaa xaaladooda ay tahay mid aad u liidata maadaama qaraxa bambaano ay haleeshay dhaliyaradaan.oo ku sugnaa gudaha shaleamada.
War Deg Deg ah: Dilal iyo Qarax xalay iyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Dalka Soomaaliya ayaa xalay iyo maanta waxaa ka dhacay qarax iyo dilal ay waxyeello ka soo gaartay Dad rayid ah iyo mas’uul u shaqeynayay mid ka mid ah Degmooyinka Gobolka Banaadir.Maanta Salaaddii Jimcaha kadib ayaa waxaa Degmada Boondheere lagu dilay Guddoomiyihii Waaxda Siinaay ee Degmadaas kaasi oo lagu magcaabi jiray Saalax Nuur Axmed, kaasi oo ay kooxo hubeysan toogteen xili uu ka soo baxay Masjid uu Salaadda Jimcaha ku tukaday.
Qof Dumar ah oo arkeysay markii Guddoomiyaha la dilayay ayaa waxay Radio Somaliweyn u sheegtay in ay Marxuumka toogteen rag Bastoolado ku hubeysnaa, kuwaasi oo markii ay dilka geysteen kadib baxsaday.
Guddomiyihii Laanta Siinaay ee Degmada Boondheere marxuum Saalax Nuur Axmed ayaa dhawaan wuxuu ka soo bogsaday dhaawac ay u geysteen Kooxo doonayay in ay dilaan Guddoomiyihii Degmada Boondheere C/kariin Maxamuud Xuuti, kaasi oo isna ka badbaaday weerarkii lagu dili rabay.
Guddoomiyihii Degmada Boondheere C/kariin Xuuti oo ka soo bogsaday dhaawacii loo geystay ayaa markii uu Isbitaalka ka soo baxay waxaa uu isaga tegay Dalka Soomaaliya si aan mar kale loo dilin.
Weli wararka magaalada Muqdisho ayaynu ku jirnaaye hal ruux ayaa ku dhintay afar ruux oo kalena wey ku dhaawacantay Xaafadda Siinaay qeybta ka tirsan Degmada Yaaqshiid, kadib markii Shineemo halkaas ku taala oo ay Dadkaas ku fiidsanayeen Bambo lagu tuuray. Lama garanayo ilaa iyo haatan ciddii Shineemada ku tuurtay Bamkaas dhimashada iyo dhaawaca geystay.
Sidoo kalena nin ka tirsanaa Shaqaalaha Shirkadda Isgaarsiinta Telcom Somalia oo lagu magacaabi jiray Ibraahin Xasan Geeddi ayaa xalay lagu dilay agagaarka Xarunta Shirkaddaas, kadib markii ay weerar ku qaadeen kooxo hubeysan oo la sheegay in ay gurigiisa taleefoon kaga soo saareen.
Dilalka iyo Qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxay yihiin kuwo maalinba maalinta ka dambeysa isa soo taraya, isla markaana ku kalifay Dad badan oo Soomaaliyeed in ay guryahooda iyo goobahooda ganacsi ka cararaan, isla markaana ay raadsadaan meel ay naftooda ku badbaadsadaan.
Kooxo hubeysan oo xalay weerar ku qaaday Koontarool ay joogeen Ciidamada Dowladda Federaalka ee Gobolka Hiiraan
Mid ka mid ah ciidamada Dowlada Federaalka ayaa ku geeriyooday mid kalana waa ku dhaawacmay weerar habeenkii xalay lagu qaaday Deegaana Kala-beyr oo fariisin u ahaa Ciidamada Dowlada Federaalka ee ku sugan Gobalka Hiiraan.
Sidoo kale kooxha weerarka soo qaaday ayaa sida wararku sheegayaan ka qaaday Barta-koontarool qaar ka mid ah hubkii Ciidamada, waxaana warku intaa ku darayaa in waqti kooban halkaa ay joogeen kooxda weerarka soo qaaday.
Askariga dhintay oo lagu magacaabi jiray C/fitaax Farasle iyo kan dhaawcmay ayaa labada la soo gaarsiiyay Isbitaalka guud ee Magaalada Beledweyne oo ay isugu soo baxeen qaar ka mid ah dadka magaalada oo wax iska weydiinayay weerarka iyo sida uu ku dhacay.
Ciidamada Itoobiya oo saakay gaaray Deegaanka Kala-beyr ayaa wararku sheegayaan in ay soo qabteen gaar noociisu yahay (TAYOTO) kasoo sida la sheegay ciidamadu ka shakiyeen, waxaana jira wali baaritaano ciidamadu ka wadaan halka iska hor-imaadku ka dhacay.
Ilaa hadda lama in kooxaha weerarka soo qaaday ka mid yihiin kooxihii dhawaan weerarka ku qaaday Kolanyo Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sii jeeday dhinaca Gobalada dhaxe, inkastoo dadku intiisa badan rumeysan yahay in kooxaha kacdoonka wada yihiin kuwo gacan saar la leh Maxkamadihii islaamiga kuwaasoo doonaya in ay rabshado ka abuuraan watada isku xirta gobalada dhaxe.
Dhinaca kale Ciidamada Itoobiya ee fadhigoodu yahay Deegaanka Janta-guudisho ayaa maalintii shalay xabisga dhigay Nin ka tirsanaa Maxkamadii islaamigaa oo lagu magaacbo Garaad islamarkaana siweyn looga yaqaano gudaha gobalka Hiiraan.
War Deg Deg ah: Agaasimihii Shirkada Isgaarsiinta Nation-Linka ee Degmada Balcad ee G/Sh/Dhexe oo la dilay
Nofeembar 29, 2007
Agaasimihii Shirkada Isgaarsiinta Nation-Link qeybteeda Degmada Balcad ayaa barqanimadii maanta markay saacadu aheyd 10:30 daqiiqo lagu dilay sida uu sheegay Afhayeenka Maamulka Degmada Balcad Mr Kaba Qori.
Sida warku sheegayo dilka agaasimaha ayaa loo adeegsaday Tooreey, waxaana xusid mudan in ninkan dilay agaasimaha uu ka mid ahaa ilaalada xarunta shirkadda Nation-Link ee degmadaasi Balcad, iyadoo marxuumkana uu isla goobtii ku geeriyooday, lamana oga ilaa hadda sababaha dhabta ah ee keentay dilka ninkaasi iyo waxa ka dambeeya.
Afhayeenka Maamulka degmada Balcad ee Gobolka Sh/Dhexe Maxamed Abshir (Kaba Qori) ayaa sheegay in ninkii ka tirsanaa ilaalada shirkadda Nation-Link ee dilka kula kacay mas’uulkii shirkadaasi ee degmada Balcad haatan gacanta lagu dhigay oo uu ku xiran yahay xabsiga saldhiga degmada Balcad, iyadoo ciidamada Booliskuna ay bilaabeen iney su’aalo weydiiyaan ninkaasi ku saabsan sababta keentay inuu dilo marxuumkaasi.
Degmada Balcad ayaa waxaa ka socda qabanqaabo loogu jiro sidii loo aasi lahaa marxuumka la dilay oo si aad ah looga yaqiinay halkaasi, iyadoo hadal heynta ugu badan ee dadweynaha ku dhaqan degmada Balcadna ay noqotay dilka maanta lagula kacay agaasimihii shirkadda Nation-Link ee degmadaasi marxuum Axmed Xasan Koofi.
Wakiilka Qaramada Miidobey ee Somalia oo Baydhabo gaaray, kulan la qaatay Madaxweynaha iyo R/wasaaraha & Dr. Shaatigaduud
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo maanta soo gaaray Magaalada Baydhabo ee xarunta Dowladda Federaalka ayaa wada hadalo la yeeshay Madaxweyne C/llaahi Yuusuf iyo Ra’iisal Wasaare Nuur Cadde.
Ahmedou Ould-Abdallah ayaa la kulmay Madaxweynaha Dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf oo dhinac taagnaa Ra’iisal Wasaarihiisa cusub Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) & Wasiirkii hore ee Maaliyada Dr. Shaatigaduud waxayna ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed iyo mida bani’aadanimo ee dalka Soomaaliya.
Kulankan oo xiiso gaar ah u lahaa Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Nuur Cadde oo bartay diblomaasi Caalami ah tan iyo markii ugu horeysay oo la magacaabay Nuur ayaa waxaa uu ahaa mid si weyn looga wada hadlayay xaaladda nabadgalyo ee dalka Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in Ergeyga Qaramada Midoobay fariin soo gaarsiiyay Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Nuur Cadde & Wasiirkii hore ee Maaliyada Dr. Shaatigaduud
Wafdigan oo ka yimid Magaalada Nairobi ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ku laabtaan isla Magaalada Nairobi ee dalka Kenya
War Deg Deg ah: Askar ka tirsan ciidamada DF oo ku geeriyootay iska horimaad ka dhacay deegaanka ceymiska iyo qasaaraha dagaalada ka sii socda Suuqa xoolaha oo sii kordhay
Labo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey iney ku geeriyoodeen iska horimaadyo iyo shaqaaqooyin ka dhacay duhurnimadii maanta deegaanka Ceymiska ee wadada warshadaha, kuwaasoo u dhexeeyey kooxo hubeysan iyo ciidamadaasi oo halkaasi ka waday howlgalo baaritaan ah sida ay ku waramayaan qaar ka mid ah dadka ku fara ku tiriska ah ee deegaanadaasi ku nool.
Iska horimaadka ayaa la sheegay inuu hallkaasi ka bilowday ka dib markii ciidamada DF ee goobtaasi tegay ay bilaabeen iney jabsadaan qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee halkaasi ku yaala, kuwaasoo qaarkood ay ka kala baxeen lacago iyo allaabadii ku jirtay, taasoo keentay in dagaalyahano hubeysan oo ka soo horjeeda ay halkaasi ku soo weeraraan, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaad soconayey muddo 30 daqiiqo ah.
Cidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka lugta lahaa iska horimaadkaasi ayaa lagu soo waramayaa iney markii dambe goobtaasi dib uga gurteen, iyagoo halkaasi kaga tegay meydka labo ka tirsan ciidamada DF oo markii dambe dadku degaanku ay bilaabeen iney jiidaan, iyadoo ay arintaasi is hortaageen odayaal ka tirsan deegaankaasi oo meydkii ka dhigay dadkii jiidayey, kuwaasoo haatan la diyaarinayo sidii loo aasi lahaa, waxaana degan imika xaalada deegaanka ceymiska.
Dhinaca kale, waxaa sii kordhay qasaaraha ka dhashay dagaal aroormadii saaka ka bilowday deegaanka Suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho oo weli halkaasi si goos goos ah uga soconaya, waxaana la xaqiijiyey illaa 10 ruux oo afar ka mid ah ay yihiin ciidamada Itoobiya ay ku dhinteen dagaalkaasi, iyadoo lixda kalena ay yihiin dadka rayidka ah ee deegaankaasi ku sii harsan, waxaana dagaalkaasi oo ah mid fool ka fool ah daryankiisa laga maqlayaa nawaaxiga deegaankaasi suuqa Xoolaha ee deghmada Heliwaa.
War Deg Deg ah: Dagaal habeenkii labaad ka dhacay Muqdisho
Nofeembar 28, 2007
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Nofeembar, 2007.